Dani Welbeck Muxuu ka yidhi Goolkii uu ka dhaliyey Manchester United?
HomeWararka MaantaDani Welbeck Muxuu ka yidhi Goolkii uu ka dhaliyey Manchester United?
10/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Laacibka weerarka uga ciyaara Manchester United ee Dani Welbeck ayaa farxad kala joojin waayey markii uu goolka guusha habeenkii xalay ka dhaliyey Manchester United markaas oo kooxdiisa Arsenal ay ku garaacday kooxda Red Devils 2-1.
Daqiiqaddii 61aad ayuu Welbeck ka faa’iidaystay kubbad uu Antonio Valencia si khalad ah ugu celiyey goolhaye De Gea taas oo uu Dani Welbeck dhexda ka qabsaday isla markaana inta uu si fudud u dhinac maray goolhayaha ku hubsaday shabaqa Manchester United.
Laacibkan caalamiga ah ee reer Ingiriis oo maalintii ugu dambaysay ee suuqa ciyaartooyada ee bishii September ee sannadkii hore ka tegay Manchester United, kuna biiray Arsenal ayaa waxa uu habeenkani u ahaa mid farxadeed.
Isaga oo la hadlaya BBC, dareenkiisana cabbiraya ayaa waxa uu Dani ku tiraabay: “Manchester United waa koox aniga wax kasta ii ah, waan taageeraa, waanay igu adag tahay in anigu aan ka reebay tartanka (FA cup)” sidaas ayuu yidhi.
24 jirkan ayaa sheegay in markii uu goolka dhaliyey inkasta oo markii hore uu damaashaaday uu haddana is badh qabtay oo uu ixtiraamayay in uu hortooda ku damaashaado taageereyaashii u saba-tumi jiray.
Waxa uu tilmaamay in uu la socday markii uu Valencia doonayay in uu kubadda u celiyo gool-wadihiisa taas daraadeedna uu ku dedaalay in inta aanu De Gea soo gaadhin kubadda uu dhexdooda ka qaato.
Kabtanka Arsenal, Per Metesacker ayaa isaguna ku tilmaamay Welbeck ciyaartoy muhiim ka ahaan jiray Manchester United laakiin gutay waajibkii ay Arsenal ku lahayd.
Napoli vs Atalanta 1-2 — Highlights & All Goals — 02/01/2018
Toos U Daawo: Doorashada Madaxweynaha Somaliya
08/02/2017 Abdiwahab Ahmed